Bangiga Dhexe: Sababtoo ah dadka caadiga ah waxay dejiyaan xisaab bangi oo lacag la'aan ah
Bankiga Dhexe iyo Ilaalinta Hantida
Way fiicantahay in aduunyada looga fikiro inay tahay goob naxariis leh oo waligaa aadan waligaa la kulmaynin dhibaatooyin sharci. Si kastaba ha noqotee, haddii aad darsid tirakoobka, waxaad ogaan doontaa inay jirto fursad fiican oo mararka qaar aad ku heli karto dacwad gacmo furan. In kabadan hal. Sida uu sheegayo qareenka Jay Mitten, qofka celceliska ah ee Mareykanka waxa uu la kulmaa toddobo dacwadood inta noloshiisa ama nolosheeda ah. Waxaa ku soo dhacaya, waxaa yimid sharci yaqaan bilaa naxariis ah oo ku daraya shidaal isla markaana aad ku shidan ololka dhibaatooyinkaaga.
Tani waxay xitaa u badan tahay dadka caadiga ah ee iyagu leh meheradahooda gaarka ah. Sida oo kale, dacwadaha lama filaanka ah - oo laga yaabo iskuday qaawan oo hantidaada ah - waxaa lagu gaarsiin karaa albaabkaaga waqti kasta. Hal shay waa hubaal dadka badankood. Macno malahan in dacwadu ka timaado ganacsi ama arin shaqsiyeed. Waxay noqon kartaa furitaan, ama xitaa canshuur. Mar kasta oo aad maxkamadda timaadid, waxaad dooneysaa in hantidaada, ama ugu yaraan qaar ka mid ah, ay ahaato kuwo ilaalin ah. Sidaasoo kale, qaar badani waxay u jeestaan bangiga badda marka lagu daro aaladda saxda ah ee sharciga ah si looga ilaaliyo hantidooda khatarta xun ee nolosha ku jirta.
Waa maxay sababta bangiyada lacag la'aanta ah?
Marka, maxay dadku u furayaan akoonnada bangiyo ka baxsan? Mareykanka ayaa kaliya haysta 4.2% tirada guud ee bulshada adduunka. Si kastaba ha noqotee, waxay leedahay 80% qareennada adduunka iyo 96% oo ka mid ah dacwadaha adduunka. Marka, ilaalinta hantida waa magaca ciyaarta ciyaarta Mareykanka maxaa yeelay tani waa qatarta ugu badan ee dhaqaalahooda. Inta badan dadka ka guurista raasamaal shaqsiyadeed ee dalka waxay diiradda saaraan fikirka ilaalinta hantida. Intaas waxaa sii dheer, waxay dareemayaan inay lagama maarmaan tahay in la ilaaliyo wixii hanjabaado ah ee mustaqbalka imaan kara — deyn bixiyeyaasha, kiraystayaasha, iyo furriinka. Inta badan weerarada sharciga ahi waxay ka yimaadaan gudaha Mareykanka.
Waxay sidoo kale u muuqdaan inay isticmaalaan akoonno dibedda ah si loo yareeyo bixinta cashuurta. Tani inta badan waa dakhli la kasbaday oo ka imanaya waddamada kale. Mareykanku wuxuu dadkiisa ku qaadaa dakhliga adduunka. Si kastaba ha noqotee, shirkadaha sida Apple iyo Google waxay gaashaandhiga ka geystaan ​​meel ka baxsan xeebaha waxayna ku raaxeystaan ​​canshuur badan. Si ka duwan Mareykanka, waddamada qaar kama qaadaan canshuur qaadashada muwaadiniintooda dakhliga adduunka. Qofkasta kama faa'idaysan karo tan, hase yeeshe, marka hore raadi talo cashuureed shati shati leh. Mar labaad, ha kaliya garabkaaga u abuurin "istaa waa sidan" istaraatijiyad canshuurta maskaxdaada. Hel talo bixin cashuula shati leh.
Dadka ka qayb qaadanaya ilaalinta hantida, inta badan waxay dhigaan hantidan mid ka mid ah dhowrka dowladood ee yaryar, madaxbanaan ee jasiiradaha. Gobolladaani waxay helaan suuq ay xiiseeyaan shisheeye daneynaya oo diyaar u ah adeegyada bangiyo shisheeye. Qaar badan oo ka mid ah waddamadan waxay leeyihiin sharci ka reebaya hantida xukunnada. Intaas waxaa sii dheer, gobollada qaarkood waxay bixin karaan heshiis qarsoodi oo wanaagsan kuwa maalgashanaya xisaabtan. Caadi ahaan, sharciga ayaa ku qasbaya qofka inuu raaco shuruucda dalkiisa ama dalkeeda.
Badbaadinta Hantida Dhulka
Ilaalinta hantida mararka qaarkood waxay qaadataa dhowr qaab. In kasta oo ay jiraan xulashooyin fara badan oo xeebaha ka baxsan, gawaarida baddaha badiyaa sida caadiga ah waxay aad waxtar ugu leeyihiin hadafka ilaalinta hantida. Waxa xusid mudan, in badaha ku haray xeebaha ay ku dadaalayaan ilaalinta hantida. Xusuusnowna, haddii aad dareento dambiile gebi ahaanba qaadashada dariiqan, ha sameyn. Ka dib oo dhan, waa hantidaada aan ka hadlayno — kuwa aad ugu dadaashay inaad hesho.
Ogoow in xudunta u ah, ilaalinta hantida ma aha wax kaliya oo aan ahayn wax khatar maamul ah. Waxay lamid tahay iibsashada caymiska caymiska; iyo sida caadiga ah ka badan oo ka ilaalin iyo qiimo badan. Haddii aad maanta ganacsi sameyso, markaa waad fahantay sida ay u adag tahay in macaash loo kasbado. Markaa, in la dhiso qalcad labada dhinacba ka ilaalisa midhaha shaqadaada oo lacagna kuu dhaqaalaysa waxay u badan tahay in aad ku dhaqaaqdid caqli leh.
Haddii aad shaqeyso wax kabadan hal ganacsi ma dooneysid sheegashooyinka ka imaanaya hal ganacsi inaad qatar geliso kuwa kale. Sidaas oo kale, waxaad ubaahan kartaa inaad ka fikirto shirkad shaqsi kasto oo ganacsi kasto. Qaabkani wuxuu ganacsi walba gelinayaa godkiisa gaarka ah ee khaaska ah. Qaabkaas, dacwad ka dhan ah hal shirkad kuma kici doonto boqortooyadaada oo dhan. Intaas waxaa sii dheer, waxaad sare u qaadaysaa xoogga istiraatiijiyadda ilaalinta hantidaada marka aad sidaa ka sameyso dibedda. Marka, waa maxay xulashooyinkaaga ilaalinta hantida xeebaha?
Nevis iyo Ilaalinta Hantida
Nevis wuxuu ahaa mid ka mid ah meelaha ugu horeeya xeebaha xilliyada casriga ah ee lagu bixiyo ilaalinta hantida iyo qawaaniinta asturnaanta. Waa hal dariiqo oo lagu isku dayo oo lagu miisaamo halista ka imaan karta ganacsi badan. Shirkadaha Nevis waxay sidoo kale iska ilaalin karaan weerarada qarsooma ee ka imaan kara qareenada foosha xun. Adeegsiga adeegga samaynta shirkad, sida tan kan, waxaad sameyn kartaa ganacsi shirkadeed oo ka baxsan badda. Ku darista aaminaad dhinaca badda ah iyo / ama aasaaska kalluumeysiga ee ka kala yimid gobollada kala duwan ee adduunka ayaa kaa caawin kara fududeynta xaddidaadaha.
Khubaradu inta badan waxay ku taliyaan ganacsatada xeebta ah ee Nevis maxaa yeelay sharciyadooda waxay doorbidaan asturnaanta iyo ilaalinta hantida. Nevis LLC, qoraalkan, wuxuu bixiyaa qawaaniinta ilaalinta ugu wax ku oolka badan ee shirkad kasta oo ka baxsan.
Waa kuwan sababaha qaar sababta Nevis LLC (qaasatan marka lagu daro kalsoonida Nevis) waa aalad ilaalin hanti aad u wanaagsan:
Mid wuxuu ubaahanyahay inuu dhigto $ 100,000 bond kahor intaanu xereynin dacwad si uu ushaqeeyo xukun kadhaca xubinimada xubinimada ee Nevis LLC.
Wareejinta khiyaanada qawaaniinta xaddidan waa muddo labo sano ah. Taasi micnaheedu waa markii aad hantida geliso Nevis LLC, laba sano ka dib, Nevis maxkamadaha ma dhageysan doonaan kiiska.
Dhanka kore, deyn bixiyuhu wuxuu u baahan yahay inuu caddeeyo wixii dhaafsiisan shaki macquul ah ee milkiilaha Nevis LLC uu maalgeliyey LLC si uu hantida uga ilaaliyo deyntaas.
Ilaalinta hantida oo ka ilaalisa deynta inuu qabsado shirkada ama hantida ay haysato waxaa la siiyaa hal-xubnood marka lagu daro LLC-yada badan.
Xitaa haddii mid ka helo amar lacag bixin, wuxuu ku dhacayaa saddex sano deyn bixiyuhu ma cusbooneysiin karo.
Xitaa ka awood badan yahay Nevis LLC waa ilaalinta hantida Nevis. Si loogu dhigo ereyo adag, Nevis kalsooni waa mid ka mid ah aaladaha ugu waxtarka badan ee ilaalinta hantida adduunka. Markay maxkamad Mareykan ah dhahdo “wareeji lacagta” wakiilku wuxuu leeyahay, “waan ka xunahay, awood uma lihid halkaan.” Markaan sameysanno aaminaada Nevis waxaan gudaha gelinaa Nevis LLC. Qaabkaas, macaamilku waa maamulaha LLC marka waqtiyadu fiicnaadaan. Kadib marka isaga ama iyada lagu soo qaado weerar xagga sharciga ah, wakiilka (shirkadayada sharciga ee Nevis) ayaa soo gali kara oo dhaqaajin kara qalcadda ilaalinta hantida.
Belize iyo Ilaalinta Hantida
Belize wuxuu bixiyaa samaynta shirkad ka sameysan shirkad ganacsi iyo bangiyo dibedda. Nevis ka dib, waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan ee ilaalinta hantida iyo asturnaanta. Denis Lormel, oo ah madaxii hore ee Qeybta Dembiyada Maaliyadeed ee FBI ayaa yidhi: "Belize waa mid kamid ah wadamada aan tagayo si aan u qariyo lacagtaydana u noolaado. "Xaqiiqdu waxay tahay in halkaas laga ilaalin doono, iyo dawladda Mareykanka malaha awoodi doonto in ay igu celiso ama ay gasho xisaabaadkayga bangiga." mid ka mid ah ujeedooyin badan oo sharci ah, ujeedooyin sharci ah.
Nevis ka dib, adiga Belize LDC oo la socota Aamin aamin waa labo ka mid ah aaladaha ugu awooda badan ee ilaalinta hantida adduunka oo dhan. Waa tan sababta.
Maxaa la isku halleeyaa?
Qaadhaanka hantida (lacagaha loogu deeqay in lagu dhiso LDC) waa laga dhaafay sheegashada wareejinta been-abuurka ee deyn-bixiye.
Sharciga xadidaadda gudbinta been abuurka ee loogu talagalay Belize LDC waa mid aad u gaaban. Waa hal sano oo keliya markii la aasaasay oo la maalgeliyey ama laba sano oo keliya laga soo bilaabo markii loo wareejiyay hantida.
Aaminaada Belize waxay leedahay faa'iidooyin lamid ah waxayna xitaa ka awood badan yihiin LDC. Sida caadiga ah waxaan sameysanay aaminaad aamin ah oo aan ku leenahay Belize LDC gudaha. Sida Nevis LLC, macmiilku waa maamulaha Belize LDC ilaa "wax xun" ay dhacaan. Markaa markii deyn bixiyuhu weeraro, Belize wuxuu maaliyad ku galayaa oo ilaaliyaa hantida. Maxakamadaada maxalliga ahi awood uma leh inay wakiilo Belize wakiil ka yihiin. Marka, kuma khasbi karaan wakiilka inuu adeeco.
Sharciga xadeynta wareejinta khiyaanada ee aaminka Beel ahaanta ayaa u gaaban sidii la doono. Furriinku wuxuu dhacaa ama dhaxalku wuxuu sheeganayaa qaanuunka xaddidida waa eber. Taasi waa, sida ugu dhakhsaha badan ee hal qof ugu wareejiyo hantidaas aaminaada, aaminaada ayaa ilaalinaysa.
Si aad uga ilaaliso hantidaada sheegashooyinka qareenimo ee naxariis darrada ah, waxaad u baahan doontaa inaad qiimeyso khatartaada iyo qiimaha iyo nooca hantidaada. Qorsheha maaliyadeed ee dibedda laga helayaa waxay bixisaa xulashooyin badan oo kaladuwan kuwaas oo aan hadda dalka laga heli karin. Si aad u bilowdo, ka hor intaadan bilaabin qorshe kasta oo horumarsan oo lagu ilaalinayo hantidaada shaqsiyadeed, waa tan waxa la sameeyo. Marka hore, waa inaad hubisaa inaad leedahay aasaas wanaagsan, aasaas adag oo ilaalinta hantida.
Muhiimad ahaan, waa inaad hantida dhigtaa aaladaha sharciga ee ku habboon. Intaa waxaa sii dheer, waa inaad doorataa awoodaha saxda ah si aad uhesho ilaalinta la doonayo. Waad ku badin kartaa hantidaada gudaheeda aaladaha sharciga ah ee bangiyada ku yaal awoodaha aan aqoonsanayn xukunka shisheeyaha. Waa cadaalad toosan oo deg deg ah in la dhiso. Intaa waxaa u dheer, adoo sidaas sameeynaya waad ilaalin kartaa hantidaada iyo aqoonsigaaga markaad ganacsi caalami ah sameyneyso. Noo soo sheeg in kuwanu yihiin waxa aad jeceshahay oo waan ku tusi doonnaa sida aad tahay.
The Kalsoonida Aagga Cook or Nevis kalsooni marka lagu daro isugeynta 'LLC' ee ka baxsan kalsoonida waa isugeyn wanaagsan. Sida kor lagu soo sheegay, marka maxkamadaha Mareykanka ay kaa codsadaan inaad dib u soo celiso lacagta, xafiiskayaga sharciga ee dibedda ayaa diidi kara inuu u hoggaansamo.
Shirkadaha Shadow ee Badbaadinta Maaliyadeed
Si xiiso leh, The Tribune-Review ayaa sheegay in ku dhawaad ​​boqolkiiba konton dhammaan ganacsatada caalamka ay ka dhigayaan iyada oo loo marayo canshuurta. Mid ka mid ah habka canshuuraha ee bangiga bankiga waa inuu helo koonto bangi oo gaar ah oo ku yaal magaca shirkadda. Sidan oo kale, waxay kaashadaa lacag ka baxsan qofkasta oo aad rabto inaad lacag ka haysato. Tan waxaa ku jiri kara deyn bixiyeyaasha, qareennada, lammaanaha hore, ama dhaqdhaqaaqa dhaqaale ee kale.
Jason Sharman, oo ah aqoonyahan bangi ka shaqaysa jaamacadda Griffith ee Australia, ayaa yidhi "Lahaanshaha shirkad qarsoodi ah runtii waa mid gacanta ku haysa hawlo badan ... Sameynta shirkad waxay noqon kartaa dhakhso iyo fududaan. Xaqiiqdii, kani waa shaqadeena gaarka ah, inta lagu guda jiro maalmaha shaqada, shirkadaheena adag waxay shirkado ganacsi u sameeyaan shirkad maalmeed. Helitaanka koontada bangi ee shirkadaada ku taal xeebaha waxay qaadan kartaa waqti badan iyo dadaal badan. Markaa caawimaad ka hel qof khibrad u leh warshadaha. Mar labaad, tani waa wax aan sidoo kale qabanno maalin kasta - anagoo ka caawineyna macaamiisha inay furtaan akoonno meel ka baxsan ah. Markaad sidaas oo kale sameyso, waxaad u badan tahay inaad u aragto inay aad qiimo ugu fadhido markay tahay inaad naftaada ka badbaadiso weerar dhaqaale.
Xisaabaadka bangiyada qaar waxay ubaahan yihiin kun oo doolar kaydiyadooda furan. Kuwa kale, gaar ahaan xisaabta bangiga Switzerland, waxay u baahan yihiin lacag hufan oo lagu maalgeliyo. Bangiyada Swiss badiyaa waxay ubaahantahay $ 250,000 illaa $ 1 milyan si loo furo xisaabta.
Badbaadada Dhulka ee Ilaalinta Hantida
Qorsheynta ilaalinta hantida dibedda ayaa noqotay mowduucyada khilaafyada dhowrkii sano ee lasoo dhaafay. Qorshaha ilaalinta hantida ugu wanaagsan waa in la sameeyo kalsooni aan laga noqosho lahayn oo leh awood gaar ah oo ballan ah. Tani waa sababta oo ah qaanuunku uma tixgelin doono hantida la aaminay inay tahay hanti dejiyaha. Maskaxda ku hay, markii aad iibsanayso kalsoonida, kaliya ma iibsanaysid aamin. Intaas waxaa sii dheer, waxaad iibsaneysaa khibradda shaqsiga ee qoraya kalsoonida.
Si loo ilaaliyo, xirfad yaqaanku waa inuu si qoraal ah u diyaariyo si ku saleysan labadaba qaanuunka iyo khibradda sharciga ee dhabta ah. Marka, tani maahan inaad adigu iskaa u sameyso. Hel caawimaad. Ka dib oo dhan, tani waa lacagtaada. Waxaa jira qaabab badan oo lagu aamino. Nooc kastaa wuxuu leeyahay ujeedo ama ujeedooyin gaar ah.
Haysashada kalsoonida badda meel kaliya ayaa laga yaabaa inay tahay ikhtiyaarkaaga ugu fiican marka laga hadlayo ilaalinta hantidaada. Xaqiiqdii, waxaan helnay aaminka xeebta ah aaladda ugu adag ee la heli karo.
Dadku waxay u isticmaalaan aaminaado dhanka badda ah wax ka badan in laga fogaado deyn bixiyaha caadiga ah. Tusaale ahaan, waxay u sameeyaan qof raadinaya inuu maalkiisa ku boobayo kiis magdhow shaqaale. Waxaan sidoo kale u isticmaali karnaa si aan uga ilaalino hantidaada qareenada foosha xun ee u dacwoonaya burburka gaariga, dabka sameeya waxyeelo ka badan caymiskaaga, iwm.
Sida farsamooyinka kale ee ilaalinta hantida, waxaa ugufiican in aaminaadda lashaqeeyo ka hor intaan dacwadu dhicin. Qaabkaas, wuxuu awoodaa inuu sida ugu fiican kuu ilaaliyo. Haa, waad u adeegsan kartaa qalcad dacwadeed ka dib. Laakiin qorsheynta hore waa mid kufiican. Kalsoonida dibedda, ujeeddadan, waxaa loo diyaariyey sidii aaminka hanti ilaalin. Taasi waa, ujeeddada ugu dambeysa waa in la ilaaliyo hantidaada.
Maxaad Sameyn Kartaa
In kasta oo kalsoonida lagala baxo ay bixiyaan fursado qorshaynta ilaalinta hantida, waa inaad si xikmad leh ula xiriirtaa. Waxaad u baahan tahay inaad hubiso in adeeg bixiyahaagu uu leeyahay waayo-aragnimo isla markaana uu u habeeyo kalsoonida si habboon. Waxaa intaa dheer, hay'ad xiriir dheer la leh wakiilka waa inuu hago abuuristiisa.
U kala wareejinta hantida Mareykanka galay aaminaad caalami ah si looga hortago in deyn bixiye hadda la aruursho ayaa noqon kara a gudbinta khayaanada. Si kastaba ha noqotee, kani waa arrin madani ah oo aan guud ahaan lahayn wax ciqaab ah oo ciqaab ah. Ereyga wanaagsan ee weedhaani waa "macaamil qarsoodi ah". Xaqiiqdii, tani waa weedha saxda ah ee ay hadda adeegsato Guddiga Sharciga Lebisiga ah. Tani waa sababta oo ah erayga khiyaano waxay u horseedaa hogaaminta kuwa aan war hayn fikirka ka daran kan runtii.
Xeerarka Canshuurta Baanka Dhexe
Asal ahaan, waxaa jira hal qabasho oo noocyadan ah xisaabaadka maalgashiga shisheeye. Taasi waa in la hubiyo in la raaco sharciyada "hagta canshuurta" Mareykanka. Shuruucdaan waxaa ka mid ah hubinta in la sameeyo waxyaabo sida:
U soo wargelinta wixii hanti ah ee lagu wareejinayo kalsooni shisheeye IRS.
Qaybinta kalsoonida ka timaada meel dibedda ah ee uu helo qof Mareykan ah ayaa suuragal ah in lagu cashuuro qofkaas.
Dhammaan dakhliyada aan la qaybin waxaa loo xisaabin karaa dakhli ahaan.
Kugu xisaabi wixii kasbaday dakhli ganacsi ee aamin ah oo laga soo saaray sanadihii hore. Haddii kale, qeybinta ayaa sababi karta in Mareykanka uu bixiyo canshuurta dakhliga sanadahaas. Tani waxay lamid tahay inay tahay dakhli lagu kasbaday sanadihii hore. Haddii daqliga aan horay loo soo sheegin, waxaa lagaaga baahan karaa inaad bixiso ganaaxyo iyo dulsaar labadaba. Muhiimadu waa in dakhliga ka soo gala dibada uu yahay mid dhexdhexaad ah. Ma bixinaysid wax kabadan ama ka yar cashuurta hadaad dhaqaalahaaga ku hayso meel ka baxsan ama bada.
IRS waxay kaa codsan doontaa adiga (ama CPA-gaaga) inaad xerayso foomka cashuurta ee fudud. Foomku wuxuu caddeeyaa qiimaha hantida ku jirta kalsoonida. Intaas waxaa sii dheer, waxaad magacaabi doontaa ka-faa'iideystayaasha dhabta ah ee aaminaada. Haddii aad ku guuldaraysato inaad gudbiso warbixintan waxaad ku kasban kartaa ganaax, iyo waxyaabo kale, $ 10,000 oo ah khidmad dambe. Haddii aad ku guuldaraysato inaad gudbiso warbixinta gabi ahaanba, way ka sii adkaan kartaa. Marka, iska hubi inaad xisaabiyehaaga dhammeystirto oo aad ku buuxiso foomamka fudud waqtiga loogu talagalay.
Si kale haddii loo dhigo, IRS waxba kama qabato haddii aad leedahay koonto meel ka baxsan ah. Lahaanshaha akoon meel ka baxsan ma soo qaado "calanka gaduudan", sida qaar si qalad ah u aaminsan yihiin. Kaliya waxay danaynayaan inaad soo sheegto dakhligaaga. Haddii aad kasbato macaashka badda ama badda, ka warbixi wixii aad kasbatay. Markaa, maahan xeebaha ama badweynta dusha u leh IRS. Waxay soo gudbineysaa dakhliga ku soo gala oo muhiim ah, iyadoo aan loo eegeyn halka dakhligani ka dhacay.
Tilmaamaha Canshuuraha ee Shirkadaha Dibadda iyo Aaminaada Canshuuraha
Waxa jira tilmaamo cashuureed muhiim ah oo ay tahay inaad ogaato inaad tahay deeq bixiye, transferor, ama fuliya hanti shisheeye. Kuwa hantidooda ugu wareegaya aaminaad shisheeye iyo sidoo kale ka-faa'iideystayaasha Mareykanka ee aaminka shisheeyuhu waa inay ogaadaan macluumaadka soo socda. Sidoo kale, haddii aad haysato hantidaada shisheeye sida shirkad caalami ah, waxaa jira waxyaabo kale oo aad u baahan tahay inaad ogaato. Gaar ahaan, qaado tallaabada ku habboon haddii aad ku dhacdo mid ka mid ah qaybahaan hoose:
Waxaad tahay saamile adigu aad leedahay 10% ama in ka badan oo ah shirkad ku taal badda. Intaas waxaa sii dheer, in kabadan nus saamiyada shirkadda ayaa leh shan ama ka yar milkiilayaasha Mareykanka.
Shan ama wax ka yar oo Mareykan ah ayaa ku lug leh saamiga shirkadaada badeed. Intaa waxaa u dheer, 60% iyo wixii ka sareeya dakhliga shirkaddaas wuxuu ka yimid maalgashi.
Waxaad leedahay kontoroolka saamiyada ee a shirkadda offshore haysta 50% ama in ka badan oo ah hanti ahaan sida hanti maalgashi. Intaas waxaa sii dheer, waxaad sameyneysaa 75% iyo wixii ka sareeya dakhliga guud oo leh dakhli maalgashi la mid ah.
Mid ka mid ah waxyaalaha kor ku qoran ma yihiin run? Haddii ay sidaas tahay, waxaad u baahan tahay inaad hubiso inaad ku soo sheegto dakhliga ku soo gala cashuur celintaada shaqsiyeed. Marka, hubi inaad la tashato CPA oo khibrad u leh hay'adaha caalamiga ah. Inta badan CPA-yada aqoonta u leh garoonkan waxay ka socdaan magaalooyin waa weyn oo leh tiro badan oo shaqsiyaad hodan ah. Deriskaaga saaxiibtinimo ee CPA ee ka socda Bugtussle, Kentucky ayay u badan tahay inuu madaxiisa kor mari doono. Waxaad wali ugu isticmaali kartaa ninkaaga maxalliga ah ama galey filinkaaga aasaasiga ah. Laakiin filinka dibedda ah, ka hel qof aqoon u leh dhulka.
Sida iska cad, waa inaad sameysataa ilaalin hanti badbaado ah iyadoo indhahaagu aad u furan yihiin. Waxay ku siisaa dariiq aad hantidaada ka dhigto meel ka sarraysa gaarista deyn-bixiyeyaasha. Marka, adoo wata qorshe caqli gal ah, iyo ka warqabka diiwaangelinta canshuurta ee shaqsiga, waxaad wax uqaban kartaa. Intaas waxaa sii dheer, waxaad ka qarin kartaa hantidaada qareenada foosha xun. Kaliya ku kalsoonow, waxaa jira dariiqooyin wax ku ool ah oo xoog badan oo aad naftaada uga ilaalin karto khatarta sharciyeed. Dad badan oo kale oo caadi ah ayaa sidaas sameeya maalin kasta.
<Illaa cutubka 5
Ilaa cutubka 7>